Buundada Maryan ee Taariikhiga - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean01 AdanaInjineerka Marvels Taariikhda Varda Bridge
13 / 12 / 2019 01 Adana, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
ku saabsan taariikhda cajiibka ah ee injineernimada
Buundada taariikheed ee Jarmalka (Varda Bridge), oo loo yaqaan "Koca Köprü Köprü ee dadka deegaanka Karaisalı ee Adana, waxay taariikh u leedahay 1900-meeyadii. Buundada taariikhiga ah wali waa la isticmaalayaa.
Buundada Varda waxay ku taal degmada Hacıkırı (Kıralan) ee degmada Karaisalı ee gobolka Adana waxaana dadka loo yaqaan "Koca Köprü köprü". Waxaa loo yaqaan Hacıkırı Railway Bridge ama Jarmalka Bridge maxaa yeelay waxaa dhisay Jarmalka sanadkii 1912. Masaafada u jirta Adana waxay 64 km u jirtaa Karaisalı dhinaca. Masaafada u jirta Adana Station tareenka waa 63 km.
Buundadan waxaa dhisay Jarmalka oo leh farsamo dhagxan dhagax ah. 6. Waxay ku taal gudaha dhulka. 1912 ayaa la furay sanadka. Ujeedada buundada waa in la dhameeyo khadka tareenka ee Istanbul-Bagdat-Hejaz.
Buundada masarry nooca 3 ah furitaanno waaweyn ayaa lagu rakibay 4 lugaha waaweyn. Dhererkiisu waa 172 m. Dhererka cagaha dhexe waa 99 m. Lugaha Bridge waa nooca taageerada birta halka daboolka korena waxaa lagu sameeyaa farsamada dharka wax lagu duugo. Sannadkii dhismuhu wuxuu ahaa 1907 taariikhda la dhammaystirayna waxay ahayd 1912. Jaranjarada dayactirka ayaa leh afar tiir oo loogu talagalay dayactirka lugaha buundada.
Wadada tareenka ee buundada waxaa loo habeeyay xaddiga xNUMX m. Xaddiga wareegga halkan waa 1220 mm marka loo eego xawaaraha 85 km. Shaqaalaha 47 ee nidaamka dhismaha sanadlaha ah ee 5 iyo injineer Jarmal ah ayaa u dhintay sababo kala duwan awgood.
Cinwaanka: Kıralan, 01770 Karaisalı / Adana
Wadarta guud: 172 m
Taariikhda furitaanka: 1916
Nooca Bridge: Viaduct
Taariikhda Buundada Varda
Mashruuca Baqdaad ee Baqdaad wuxuu ahaa mashruuc weyn oo dabooli doona dhulka Ottoman oo dhan. Buundada Jarmal, jidka-isku xirta-magaalada-Baghdad-Hejaz, waxaa lagu beddelay taariikhda silk-ga waxaana Jarmalka ay dhiseen horraantii 1900-meeyadii oo ahayd buundo muhiim u ah Galbeedka iyo Bariga.
Sanadkii 1888 II. Heshiiskii ay kala saxeexdeen Abdulhamit iyo amiirka Jarmalka Kaiser Willhem, dhismaha jidka tareenka ee Baqdaad waxaa la siiyay Jarmalka. Qaybta ugu adag ee tareenka, oo lagu dhammeeyay 15 sano iyada oo deyn loo qoondeeyay Bangiga Deustche Bank, ayaa ka muuqday buuraha Taurus.
Baaxadda mashruucu, waxaa loo qorsheeyay in la dhiso shabakad tareen oo laga bilaabo Haydarpaşa illaa Baghdad-Aleppo-Dimishiq. Ottoman, militariga, alaabada iyo gaadiidka rakaabka oo ay wehliyaan mashruuca; Waxaa la qorsheeyay in dadka Jarmalka ay gaaraan ilaha shidaalka ee ay u baahan yihiin. Dhismaha jidka tareenka ee buuraha Taurus wuxuu bilaabmay 1900-meeyadii. Intii u dhaxeysay 1905 iyo 1918, daraasiin wadooyin, buundooyin iyo Varda Viaducts ayaa laga dhisay gobolka Belemedik, oo ahayd meesha ugu muhiimsan uguna adkeyd ee transit-ka loo isticmaali jiray saldhig sannadihiias. Wadarta 16 meelood ayaa laga dhisay inta u dhaxeysa degmada Pozantı Belemedik iyo Hacıkırı. Kuwa ugu dheer waa 3 kun 784 midka ugu gaabanna waa 75 mitir.
Dhismaha Buundada Varda
Birin Bridge ee da Varda bilinen, oo sidoo kale loo yaqaan Buundada Jarmalka, waa wax la yaab leh oo injineer ah oo ay weheliso taallooyin taariikhi ah. Buundada Jarmalka; dhagax dhigis Waxaa lagu dhisay afar tiir oo waaweyn, buundada, oo dhererkeedu yahay 172 mitir, waxay leedahay dherer cagaha dhexe oo leh 99 mitir. Cagaha buundadu waa nooc bir ah oo taageero ah daboolka sarena wuxuu ka samaysan yahay farsamo bir ah. Dhismaha buundada Jarmalku waxay bilaabatay sanadkii 1907 waxaana dhismaha buundada tareenka la dhammeeyay 1912. Waxaa jira jaranjarooyin dayactir oo gaar ah afarta tiir ee dayactirka lugaha buundada. Intii lagu guda jiray dhismaha buundada taariikhiga ah, oo soconaysay 5 sano, 21 shaqaale ah iyo injineer Jarmal ah ayaa dhintay.
Markii ay si guul leh ku dhammaystireen wejigan adag ee khadka tareenka ee Baqdaad kadib sanado shaqo, Jarmalka waxay dhiseen buundada Varda Bridge dhererkeedu yahay 200 mitir iyo dherer ah 99 mitir si gaadiidka loo fududeeyo iyagoo isku xiraya labada daraf ee dooxada fiiqan. waxay lahaayeen.
Qiyaastii buundada Jarmal, waxaa jira laba tune oo isku xiga oo maanta loo isticmaalo gaadiidka iyo lugta buundada aan la adeegsan. Wadadani hore, oo loo isticmaali jiray marinka ka hor dhismaha Buundada Varda laakiin waxay halis weyn ugu jirtay in ay tareenka ka gudbaan sababta oo ah qaabkeeda “U”, ayaa laga saaray dhismaha buundada Jarmalka, taas oo u oggolaaneysa marinka tooska ah ee dooxada.
Muuqaalka Muuqaalka Mawaadiida Waddada Biyaha Wabiga ee la qabto bisha Sebtembar
Varda Bridge waxay ahayd albaabka dakhliga
Sawir sawir ah oo ku saabsan mawduuca Tareenka iyo Varda Bridge
Safarka Turkiga ee Heerka Sare ee Olympos Teleferike Danta Muhiimka ah (Video)
Miyuu jiray maalgashi metro taariikhda Osman?
IZBAN varda BURBAN sababta aan
Wadada Tareenka ee Magaalada Baqdaad ee Hejaz
Khadka Tareenka ee Baqdaad
Buundada tareenka ee Hacıkırı
Ku saabsan Buundada Varda Taariikhda
Ku saabsan buundada Varda